Ọhụrụ Virus nro? WTN na-akpọ oku maka ikike ịgba ọgwụ mgbochi zuru ụwa ọnụ yana nha anya na nkesa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » WTN » Ọhụrụ Virus nro? WTN na-akpọ oku maka ikike ịgba ọgwụ mgbochi zuru ụwa ọnụ yana nha anya na nkesa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
South Africa nọ n'ọnọdụ ụjọ na iwe ka achọpụtara ụdị Omicron nke coronavirus.
N'abalị, ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na-atụ anya ọkụ na-enwu na njedebe nke ọwara ahụ, laghachiri n'oge ọchịchịrị na-emechi ókèala, kagbuo ụgbọ elu, yana nje nje amaghị ama na-eyi ahụike ọha na eze egwu.
Taa, ụwa na-eche nsogbu ahụike ọha ihu ihu na nchọpụta nke ụdị amachaghị nke nwere ike na-efe efe yana ụdị Omicron dị ize ndụ nke coronavirus. Udiri ahụ sitere na South Africa, a chọpụtakwara ya n'okwu dịpụrụ adịpụ na Hong Kong na Belgium.
23.8% nke ndị bi na South Africa agbaala ọgwụ mgbochi zuru oke, na n'ọtụtụ akụkụ nke Africa, ọnụọgụ a bụ naanị n'otu ọnụọgụ, enweghị ọgwụ mgbochi zuru oke.
Njem nlegharị anya chọrọ ịdị n'otu ụwa ugbu a karịa mgbe ọ bụla mba dị iche iche na-enyere mba ibe ha aka.
Dr. Peter Tarlow, onye isi oche WTN
Dr. Peter Tarlow, Onye isi oche nke WTN, na-echetara ụwa na mba niile na-ekerịta obere mbara ala a nakwa na anyị ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji kpochapụ COVID-19 n'ebe niile n'ụwa.
Ịlụ ọgụ COVID abụghị ọrụ nke naanị otu obodo, kama nke mba na ókèala niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ahụike na ụwa udo.
Juergen Steinmetz, Onye isi oche WTN
Onye isi oche WTN Juergen Steinmetz gbakwụnyere: “Nkesa nha nha nke ọgwụ mgbochi na mba niile bụ isi. Ka anyị na-echetara ụwa: Ọ dịghị onye ọ bụla dị nchebe ruo mgbe a gbara onye ọ bụla ọgwụ mgbochi!"
A maara nke a site na mmalite mgbe Onye isi ala US Biden kwuru obere oge ka ọ chịchara ya, Ọ nweghị onye nọ na nchekwa ruo mgbe ọ nweghị ihe ọ bụla.
Site n'ịgbasoghị iwu sayensị, ụdị nje ndị na-adịghị achịkwa ya dị ka nje Omicron nwere ike ịmalite ngwa ngwa. Ụdị dị otú ahụ nwere ike otu ụbọchị gbanahụ nchebe ọgwụ mgbochi anyị ugbu a, na-amanye ụwa ịmalite n'oge niile.
Nke a bụ ihe ize ndụ nke ụmụ mmadụ enweghị ike ịkwado ya.
Kpọmkwem, na mba ebe ọgwụ mgbochi na-adịghị dị, ihe iyi egwu ịkpalite ọnọdụ nro dị otú ahụ dị elu.
Ọnọdụ na-apụta na South Africa ugbu a na-ekewapụ mba 8 n'otu abalị site na njem mba ụwa na njem nlegharị anya ma na-egbochi akụ na ụba. Nke a kwesịrị ịbụ oku ịkpọte anyị niile.
Naanị imechi oke n'etiti mba bụ naanị ndozi dị mkpụmkpụ. Ụwa a nwere njikọ chiri anya, nje anaghị asọpụrụ oke. Isi ihe ụmụ mmadụ maara n'oge a bụ ọgwụ mgbochi.
Nke a na-agụnye nkesa sara mbara ma nwee olile anya zuru oke n'ebe niile, na-adabereghị na uru ego ma ọ bụ ihe mgbochi, ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ihe ndị ọzọ kpatara ụwa.
The Network Njem Nleta Ụwa Otu ugboro ọzọ na-akpọ maka izu ike nke iwu patent na nkwekọrịta mba ụwa iji mesie ike na e nwere ọgwụ mgbochi dị irè n'ebe niile.
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke African Tourism Board
The World Tourism Network, dị ka isi onye mmekọ nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB), na-enwe mmetụta maka ndị nọ na South Africa, yana ndị enyi na ndị otu nọ na njem na njem nlegharị anya.
Onye isi oche ATB Cuthbert Ncube ekwupụtala okwu n'okwu gbasara nkesa ọgwụ mgbochi nha nha yana izu ike nke ihe ikike chọrọ iji kwado nke a.
Ọnọdụ a na-ewere ọchịchị siri ike karịa njem nlegharị anya, anyị niile kwesịrị ịkwanye ma kwado atụmatụ ọ bụla nke na-emesi ebumnuche mmadụ a ike maka ịnweta ọgwụ mgbochi.
Ọchịchị na-adịghị achọ ọdịmma onwe onye nanị na UNWTO, WHO, na gọọmentị, na ụlọ ọrụ ndị bụ isi dị mkpa karịa mgbe ọ bụla taa.
WTN na-akwado ikike ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụrụ na ndị Sayensị na ahụike kwadoro ya, yana maka ndị nwere ike ịnata ọgwụ mgbochi ahụ n'enweghị nsogbu.
Ndị ọzọ na World Tourism Network na ịbụ otu: www.wtn.travel